Umlando kaJohn Updike | Izincwadi Zamanje
UPepe Aedo | | eziningana
UJohn Updike wazalelwa phakathi Pennsylvania, United States e 1932.
Uma bekufanele uchaze umsebenzi wakhe ngemisho embalwa, kungashiwo ukuthi iyi-fresco enhle yesigaba esiphakathi saseMelika.
I-Updike waya kwabadumile I-Harvard University lapho athweswa khona iziqu ku-Literature ngo-1954. Ngaleso sikhathi waqala ukusebenzisana nomagazini wezincwadi, futhi ohlonishwayo (mhlawumbe umagazini wezincwadi ohlonishwa kakhulu) New Yorker; futhi kusukela lapho kuze kube namuhla ubelokhu eqhubeka nokusebenzisana ngokuhlaziya nezindatshana ezikulolo shicilelo.
Incwadi yakhe yokuqala yavela ngo-1958 futhi, okuxakayo ukuthi, yayiyiqoqo lezinkondlo, kuyilapho iningi lomsebenzi wakhe omkhulu wakamuva kube yizindaba ezimfishane namanoveli.
I-Updike Uyindoda enesimilo futhi enesiyalo, ubhala nsuku zonke futhi ashicilele (noma azame ukushicilela) incwadi eyodwa ngonyaka, umkhiqizo wakhe ucishe ube ngamavolumu angamashumi amahlanu.
Kodwa izincwadi zakhe ezaphumelela kakhulu yilezo ezaqala ngo-1960 ngale noveli Gijimisa unogwaja futhi baqhubeka ngezitolimende eziningi ezazimele UHarry Rabbit Angstrom njengo-protagonist.
Unogwaja ucebile ngo-1980, futhi Unogwaja uyaphumula ngo-1990 baqedela i-trilogy, futhi bamwinela izindondo ezimbili Pulitzer. Kepha ngaphandle kwe- Pulitzer, I-Updike Usezuze eminye imiklomelo ephezulu kubandakanya iNational Book Critics Circle Award, iPEN-Faulkner Award for Fiction, kanye neRea Award yeNdaba Emfishane.
Uma kukhona okufana ngakho ukuthi zonke izincwadi ze I-Updike ngukuthi kuzo kwenziwa isifundo ngokucophelela sebanga eliphakathi laseNyakatho Melika. (Leso sigaba esiphakathi esisebenzisa ukuzijabulisa okungenamsoco kodwa futhi sisebenzisa (futhi siveze) izinto zobuciko ezifana I-blues, John Coltrane, Frank Sinatra, I-Faulkner o USam Shepard).
Ukubukeka kwe- I-Updike mayelana nalezi zidalwa iphazamisa phakathi kokugxekwa okungaqondakali nokuqonda okuhle komuntu osemgwaqweni, ngomzabalazo wakhe wansuku zonke, umsebenzi wakhe, umndeni wakhe, umkakhe, izingane zakhe, inkolo, ubulili ...
Njengoba sishilo, UJohn Updike Ube ngumbhali ovelele kakhulu, kepha kulesi sici kufanele kungezwe ikhwalithi enhle kakhulu esekelwa ngokuhamba kwesikhathi kwemisebenzi yakhe. Yini ehlukanisayo I-Updike Akuwona amaphuzu amabili noma amathathu aphakeme (uchungechunge lweRabbit) lomsebenzi wakhe, kodwa uhlu olude lwezincwadi, zonke ezinekhwalithi emangazayo yokubhala.
Kulolo hlu olude lwemisebenzi esingasisho Isikole Somculo, ICentaur, Incwadi KaBech, Isikhukhukazi Sokhuni, I-Asylum Fair, Izithandani, Ukubuya Konogwaja, Ukuhlangana, Ukufinyelela Olwandle, Abathakathi base-Eastwick, iRoger's Version, Ubuhle beminduze y Amaphupho egalofu, phakathi kwabanye.
Yonke imisebenzi yakhe ihamba emkhakheni weqiniso, okungamangalisi ukuba ngumbhali waseMelika (enye inketho kwakuwukwesaba).
Impilo yakhe yangasese ibilokhu izolile futhi ingenakulinganiswa: ushade kabili futhi unezingane ezine.
Incwadi yokugcina ayikhiphile ibizwa ngokuthi Ubuphekula, incwadi ekhuluma ngodaba lokuhlaselwa kwamaphekula ngokombono wentsha engama-Arabhu eyazalelwa futhi yakhulela khona United States.
UJohn Updike Uneminyaka engama-76, futhi uyaqhubeka nokubhala ...
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » eziningana » I-Biography kaJohn Updike